Maitiro Ekutora Zvemukati Vatengesi
China, April 3, 2014 China, April 3, 2014 Douglas Karr
Takakomborerwa kusangano redu nehukama hwakakura nevemukati mekutengesa nyanzvi - kubva kuzvikwata zvekushambadzira kumakambani emabhizinesi, kune vekumahombekombe vatsvagiri uye mabloggi, kune vanozvimiririra vafungidziri vanyori vehutungamiriri uye nemunhu wese ari pakati. Zvakatora makore gumi kuisa pamwechete zviwanikwa uye zvinotora nguva kuenzanisa munyori chaiye nemukana wakakodzera. Takafunga nezvekuhaya munyori kanoverengeka - asi vamwe vedu vanoita rakakura basa ratisingazombodaro
Midzimu Yekushambadzira Kare, Ikozvino uye Remangwana
Svondo, Zvita 22, 2013 China, April 1, 2021 Douglas Karr
Gore rega rega ini ndinonetsekana kuti ndonyora here kana kuti kwete yekufungidzira kutumira kana kukurudzira yemumwe munhu. Kapost akaisa pamwechete iyi infographic - Iwo Midzimu Yekushambadzira Kare, Parizvino & Ramangwana: Chinangwa chedu infographic chaive kutora chinyorwa chekare, chazvino, uye kwete-kure-kure-ramangwana rekushambadzira. Tinovimba unozvifarira. Kufungidzira kunondinetsa nekuti vanogona kuseta tarisiro isingazogone kuzadzikiswa. Ndinotenda iyo
Mune ongororo nyowani yakatumirwa naKapost kubva kuAberdeen Boka, tsvagiridzo yakawana vashoma vashambadziri vanonzwa kuti vari kugadzira zvakakwana nekutevera zvirimo. Uye mukana unoshandiswa uri kubuda pakati pevatungamiriri vezvinyorwa uye vateveri vezviri mukati. Kapost inodaidza iyo nguva yekushanduka uko kudiwa kwakakwira asi kuronga kwakanaka kuri kushomeka Zvemukati Chaos. Vakagadzira iyo infographic pazasi yekuisa yakakosha zvipingamupinyi (uye mabhenefiti) kumisikidza yakanyatso gadziridzwa zvemukati mashandiro maitiro. Nezvose